Inkangeleko enigmatic yemizobo yeFaiza Maghni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobi UFaiza Maghni Uzalelwe e-Oran, eAlgeria, ngu Umzobi ozifundisayo unomdla kubugcisa besizwe, kwimizobo emincinci yasePersi kunye nokupeyinta okwangoku, uzotyelwa kukwenza imisebenzi yakhe. Utsho uzama "Ukuguqula ubuhle kunye nokuntsonkotha kwabasetyhini ngemifanekiso yabo", efuzisela kwimizobo yakhe ubutyebi beempahla zakhe kunye nezinto azisebenzisayo, zonke zinikwe imbonakalo eyindida, engakhululwanga kubuhlungu, kwaye zonke zijolise kwimbonakalo engaqondakaliyo. UFaiza Maghni uhlala kwaye usebenza kwi EParis ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Ndazalelwa eOran, eAlgeria, ngoku ndihlala eParis. Le eclecticism inefuthe kubuhle bam, ngakumbi inkcubeko kunye nezithethe zabantu bam, isixeko esityebileyo saseMeditera esibonisa iimpembelelo zempucuko ezininzi abahlala kuzo: iSpanish, i-Jewish, i-Arab, i-Andalusian, i-Ottoman ne-French. Konke oku kushiye uphawu, nokuba kuyilo, umculo okanye indlela yokuphila ngokubanzi. Emsebenzini wam ndizama ukuhambisa uhlobo oluthile lokuthandana oluphefumlelwe yimibongo yamaArabhu kunye namaPersi, ndithatha ukuphefumlelwa kwam kwizinxibo kunye neenwele zamanqaku amade adlulileyo endiwafumana egcwele ubuqili kunye nokumodareyitha. Nditsalelekile kwiintsingiselo zokomfuziselo ezifumaneka kubucwebe besizwe kwaye ndiyibuyisile le ndlela kwimizobo yam, njengabafazi bendlulamthi abantamo ziphezulu baseBurma, abathi kwangaxeshanye babe luphawu lobuhle nokunyanzelwa ngenkohlakalo.
Ukupeyinta sele kungumnqweno ongaphaya kokuqonda okanye kufihlakele ngokupheleleyo kuye kwaba yinto yendalo kwixa elizayo. Umtsalane ngu amashishini amaPersi, ikrafigraphy yama-arabic, nayo ubugcisa besizwe kunye Umzobo wangoku, ephefumlelweyo ngumsebenzi wakhe kwaye iyila eyakhe indalo. UFaiza uzama ukuguqula ngemifanekiso yakhe, ubuhle kunye nokuntsokotha kwabafazi kwimizobo yakhe, apho befanekisela ubutyebi be-wardrobe kunye nembonakalo eyintsingiselo yabo jonga. Ukugxila kwakhe kwintetho engabonakaliyo kumanyanisa umhlaba wemifanekiso yakhe.
Bendiqala ukuzoba ukususela ebuntwaneni. Utata, umzobi ongahlawulwayo, wandinika ukuthanda ukupeyinta nokuzoba. Ndimbukele esebenza, ndilithanda ivumba le-inki nephepha, wasela kwisimo sakhe sokuzola kunye nokugxila. Ngeli xesha, umama wandifundisa ukuthanda ukufunda. Wayengutitshala waseFrance kwaye wayenethala leencwadi elikhulu, ngakumbi uncwadi lwaseFrance. Ukuba ndingumntu ocinga kakhulu ngam, oku kwandinceda ndaqhubeka nokukhulisa incasa yam kubugcisa. Njengokuba ndandikwishumi elivisayo, nam ndaba nomdla kwifashoni. Nditsale abafazi banxibe iisuti njengoko bendiphupha, njengoko bendiphupha ngokuba ngumyili wefashoni eParis njengoYves Saint Laurent, njengoko naye ephuma eOran.
Kwimizobo yam, uhombiso lubonisa izimo zengqondo ngamanye amaxesha zinobuzaza, ngamanye amaxesha zingqwabalala, ngamanye amaxesha zingenaxhala, kwaye kwabanye kukho ubungangamsha obuthile. Ukubaxwa kuhlala kudalwa ukubonisa amandla am. Ngamanye amaxesha isuti inokuba sisixhobo esimangalisayo kwaye ngamanye amaxesha uhlobo lokufihla ukukhanya kunye nescreen esikutyhilayo.
Kwisangqa sam esikufutshane, ukupeyinta kwabonwa njengokuzonwabisa ngakumbi kunobugcisa. Baqala ukundithathela nzulu kamva, xa ndandiqala ukuveza umsebenzi wam. Ukuba khange ndithathe isigqibo sokuya kuhlala eParis nomyeni wam kunye neentombi zam, ndicinga ukuba ngekhe ndibengumzobi. Zininzi kakhulu iimbambano zosapho kunye noxinzelelo kwezentlalo kwilizwe endilithandayo, kodwa eliya lisanda ngokwandayo, lenza ukuba kube nzima ukukhula ngobugcisa ngaphakathi kwemida yobudenge, apho kukho uxanduva olubekwe kwabasetyhini.
Xa ndabona iipeyinti zokuqala zikaBaya omncinci (Mahieddine), owayephila ngexesha likaPicasso, owapeyinta abantu ababhinqileyo abazizidenge, basendle nabakhululekileyo. Ndive kwangoko unxibelelwano kumandla awodwa kunye nenkululeko yomsebenzi wakhe. Ngoku ndiyaqonda ukuba yile nto bendiyiphefumlelwe ngomzuzu wokugqibela. Nantsi igalari yemifanekiso engakholelekiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukubukeka okumangalisayo kwemifanekiso kaFaiza Maghni